Home Wararka Gudaha Muxuu CC SHAKUUR kala hadlay Wasiir Khadiijo iyo wasiiro goboleedyada dalka?
Ergeyga gaarka ah ee Madaxweynaha JFS u qaabilsan arrimaha Gurmadka Abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa caawa kulan fogaan arag ah la yeeshay dhammaan wasiirrada Gargaarka dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalka, xubno kale oo ka kala tirsan Xafiiska Ra’iisul wasaaraha iyo wasiirka gargaarka ee XFS Khadiijo Maxamed Diiriye.
Kulankaan ayaa waxaa looga hadlay mudnaan-siinta Gurmadka Abaaraha iyo sidii si wadajir ah la iskaga kaashan lahaa caawinta ummadda Soomaaliyeed ay abaaruhu halakeeyeen.
“Waxa ay sidoo kale wasiirradu ballan qaadeen in ay wada shaqayn buuxda la yeelanayaan ergeyga, iyagoo soo dhoweeyey sida dardarta leh ee uu Xafiiska Ergeyga gaarka ah ee Arrimaha Gurmadka Abaaraha uu u dhaqaajiyay howlaha Gurmadka,” ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Ugu danbaynii Ergeyga iyo wasiirrada dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka waxa ay isla qaateen in kor loo qaado wacyiga bulshada iyo in si wadajir ah loogu gurmado dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Previous articleAskar ka tirsan milateriga oo sabab yaab leh maanta shacab ugu dilay Muqdisho
Next articleXaqiiqooyinka Laga Diwaan Galiyay Kulankii Ay Real Madrid Garaacday Liverpool
Madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez”ma rabto” Kylian Mbappe
QM Oo Sheegtay Inay Ka Go’an Tahay Sii Wadista Taageerada Ay...